Ndị mmadụ kwesịrị iji nnukwu mmerụ ahụ arụ ọrụ. Mmerụ ahụ na ọrịa ndị ọrụ na-anaghị egbu egbu na-eme kwa ụbọchị n'ụwa niile. Ọ dabara nke ọma, na ụlọ ọrụ na -eji FIBC, nke a makwaara dị ka nnukwu akpa, nnukwu akpa nwere ezigbo SWL na -enyere aka belata ọnụego mmerụ ahụ n'ebe ọrụ ...
Akpa FIBC nwere ụdị PE liners dị iche iche
Polyethylene liners, nke a na -akpọkarị poly liners, bụ rọba rọba na -agbanwe agbanwe ahaziri nke ọma ka ọ dabara na nnukwu akpa na -agbanwe agbanwe (FIBC ma ọ bụ nnukwu akpa). Ịnagide ihe ndị nwere mmetụta na kemịkalụ na -emepụta mkpa nchekwa ugboro abụọ. Poli ...
FIBC (Nnukwu ihe na-agbanwe agbanwe nnukwu akpa) bụ nnukwu akpa ejiri eriri rọba a na-akpọkarị polypropylene nke nwere ọtụtụ uru dị ka ike dị egwu, ịdịte aka, nguzogide, mgbanwe na mgbanwe. Akpa Jumbo na -achọsi ike n'ihi vari ...
Ego ole ka nnukwu akpa na -ebu?
A na -eji nnukwu akpa, makwaara dị ka akpa jumbo, nnukwu akpa, nnukwu akpa, ruo ọtụtụ iri afọ. A na -eji ha n'ọtụtụ ụlọ ọrụ wee weta uru dị egwu. Mgbe ndị mmadụ na -ahọrọ nnukwu akpa, ha ga -achọpụta etu ha ga -esi gbakọọ ike akpa ahụ imezu ihe ha chọrọ. Otu bul ...
Ụdị akpa Fibc, Nnukwu akpa Fibc, Akpa Jumbo Fibc, Pp akpa Fibc, Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Akụ Fibc Akụkụ,